January 2010 | AA ZIMBABWE
Submitted by AA Zimbabwe on Sun, 2010-01-31 16:20
Arrested Farmers Remain Behind Bars - Two farmers, who were arrested over an ongoing land battle in Chipinge, are set to remain behind bars until Saturday, when they will appear in court in Mutare. [All Africa : Zimbabwe]
World Cup Benefits Exaggerated - BCZ
Submitted by AA Zimbabwe on Sun, 2010-01-31 16:19
World Cup Benefits Exaggerated - BCZ - HOTELIERS and tourism companies have for years been in a public relations overdrive to illustrate the benefits of a Fifa World Cup tourney to be hosted by South Africa in a few months' time. Zimbabwe Tourism Authority (ZTA) is one such entity at the centre of the World Cup hype. ZTA and many others had hoped to see sports tourism spilling into Zimbabwe while hoteliers hoped for packed room occupancies. [All Africa : Zimbabwe]
Major Facelift for Upper City Hotel - UPPER City Hotel, formerly Bira, has undergone a US$700 000 facelift which has changed the face of the Avenues area in Harare. The facelift was after a group of local investors signed a three-year lease agreement with the Zimbabwe Farmers' Union (ZFU) to re-brand, refurbish and expand the former Bira Hotel into a modern leisure and conferencing facility targeting the upper class. [All Africa : Zimbabwe]
Hailstorm Destroys Schools
Submitted by AA Zimbabwe on Fri, 2010-01-29 01:08
Hailstorm Destroys Schools - OVER 700 pupils at two schools in Mhondoro are learning in the open after a hailstorm blew off roofs of classroom blocks and destroyed stationery and furniture worth thousands of dollars last Saturday. [All Africa : Zimbabwe]
Outrage As High Court Dismisses SADC Land Ruling - The shock decision this week by the High Court to dismiss a 2008 regional ruling on the unlawful land 'reform' programme has sparked an angry outcry, with some observers calling it a 'travesty of justice'. [All Africa : Zimbabwe]
Submitted by AA Zimbabwe on Fri, 2010-01-29 01:07
Pump Failure Cripples Water Supply - The City of Harare has failed to pump water from the Letombo reservoir for about two weeks as levels there have fallen to around 1,2 metres. [All Africa : Zimbabwe]
City Refuse Truck Deal Stalls - Harare residents will have to cope with uncollected garbage for a while longer amid reports that the US$10 million deal council entered into with a local bank to buy refuse trucks was not conclusive. [All Africa : Zimbabwe]
Government Targets 50 Percent Land-Holding for Women
Submitted by AA Zimbabwe on Wed, 2010-01-27 10:23
Government Targets 50 Percent Land-Holding for Women - Government will address gender imbalances by increasing the percentage of landholding by women to 50. [All Africa : Zimbabwe]
Australia to Assist Country
Submitted by AA Zimbabwe on Wed, 2010-01-27 10:22
Australia to Assist Country - The Australian government, a vocal critic of Harare and one of the governments instrumental in getting it kicked out of the Commonwealth, has softened its approach and will now provide assistance to Zimbabwe. [All Africa : Zimbabwe]
Defend Heritage - Chombo
Submitted by AA Zimbabwe on Sat, 2010-01-23 07:43
Defend Heritage - Chombo - ZIMBABWEANS should remain resolute in defence of the country's heritage and independence, a senior Zanu-PF official has said. [All Africa : Zimbabwe]